« Last post by waiyanlin75 on December 05, 2017, 04:44:00 PM »
« Last post by waiyanlin75 on December 05, 2017, 04:11:27 PM »
« Last post by waiyanlin75 on December 04, 2017, 06:06:23 PM »
« Last post by waiyanlin75 on December 03, 2017, 11:47:50 AM »
ဇီးထုပ်မှာပါတဲ့ အကောင်းဆုံး ဟောစာတမ်း
သင်္ဘောပျက်ပြီး ကျွန်းပေါ်ရောက်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ကျွန်းပေါ်မှာ တယောက်တည်း - အထီးကျန်နေတယ်
ကျွန်းပေါ်မှာ နှစ်ယောက် - လူမှုပါတ်ဝန်းကျင်
ကျွန်းပေါ်မှာ သုံးယောက် - နိုင်ငံရေး
« Last post by tunaye2011 on September 21, 2017, 10:10:33 AM »
#Mg Bo Hla
​ဖေ့စ်​ဘုတ်​ ​ပေါ်မှာ မ​နေ့ကမှ ချစ်​သူဖြစ်​သွား တဲ့ ​ခေး​လေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်​​နေ​တော့ ကျုပ်​​ပျော်​သွားတယ်​
" ဦး "
" ​ပြော ခလိန်း "
" ဦး ​ပျော်​လို့ရပြီ သိလား "
ချိန်းတွေ့တော့မယ်ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေမိတယ်။
“ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ”
“ဖူးးးးးး ”
သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီတောင် ပါးစပ်က ပြန်ထွက်ကုန်တယ်။လခွမ်းမှပဲ။
“ဟဲ့ နေပါဦး ခလိန်း ဘာပြော”
“ခလိန်းမှာ ဦး နဲ့ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ခစ်ခစ်”
“ဟယ် ဘယ့်နှာလုပ် ကိုယ်ဝန် ရှိနေသတုန်း နင်နဲ့ငါ အပြင်မှာလည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပဲနဲ့”
“ဦးနော် ဘာလဲ ခေါင်းရှောင်ချင်တာလား တရားစွဲလိုက်ရမလား ပြော”
တစ်ဖက်က လေသံမာလာတော့ ကျုပ် ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ဒါနဲ့–
“ဟွာလေ ခလိန်းက ကိုယ်နဲ့ဘယ်တုန်းက ဟွာပြုမိလို့ ဘယ်လို ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတာလဲလို့”
“သြော် ဦးက စားပြီးနားမလည် ဝါးပြီးထွေးထုတ်တတ်တဲ့ လူစားကိုး”
“မနေ့ညက cb မှာ ခလိန်းကို ဦးက ပြောတယ်လေ”
“ခလိန်း နားမှာ ဦးအမြဲရှိနေတယ်ဆို ပြီးတော့ ခလိန်းဘေးနားမှာ ဦးရဲ့လိပ်ပြာလေး အမြဲရစ်ဝဲနေတယ်ဆို”
“ဦး အဲ့လိုပြောနေတုန်း ညက ခလိန်းအခန်းမှာ မီးပျက်သွားတယ် ပန်းအိုးကျကွဲတယ် ပန်းအိုးထဲက နှင်းဆီပန်းတွေ ကြေမွသွားတယ်”
“အဲ့ဒါ မနက်ကြတော့ ပျို့ချင်သလို ဖြစ်နေလို့ ဆေးခန်းသွားပြတာ ဆရာဝန်က ပြောတယ်”
“ခလိန်းမှာ ကိုယ်ဝန် သုံးလ ရှိနေပြီတဲ့”
“အဲ့ဒါ ဦးနဲ့ရတာ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူနဲ့ ရမတုန်း”
ကျုပ် မျက်ရည်ပါ ဝိုင်းလာတယ်။သောက်ကျိုးနည်း ဖြစ်ပုံများ။
ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရည်းစားထားတဲ့ တဏှာတစ်ကြော ခုတော့
အဲ့ ကလေးမကို ဘလော့လိုက်ရတယ်။ဖုန်းနံပတ်ကို ဘလက်လစ်ထဲ ထည့်ရတယ်။
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်း။နင့်မေကလွှားမှပဲ။
« Last post by zinzin1996 on August 13, 2016, 12:52:14 AM »
ကမ္ဘာ့အိုလမ်ပစ်ပွဲ (Olympic Games Rio 2016) သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အားကစားသမား ၁၁ ဦး သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ၊ ၁၁ ဦးစလုံး ရွှေတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ T4K သတင်းဌာနမှ ကြေငြာသွားပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် အားကစားသမားတွေကတော့... ...
1. သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် - သီဟတင်စိုး
2. မာရသွန်ပြိုင်ပွဲအတွက် - ကဗျာဘွဲ့မှူး
3. မယ်ပြိုင်ပွဲအတွက် - ဇွန်သဉ္စာ
4. တေးဂီတပြိုင်ပွဲအတွက် - ဖိုးလပြည့်
5. ရေကူးပြိုင်ပွဲအတွက် - ဝေဠုကျော်
6. သစ်သီးဝလံပြပွဲအတွက် - မိုးယုစံ
7. အလှကုန်ပြိုင်ပွဲအတွက် - မိုးဟေကို
8. မြင်းစီးပြိုင်ပွဲအတွက် - သဇင်
9. ဒိုင်ဗင်ပြိုင်ပွဲအတွက် - လူမင်း
10. မောင်ပြိုင်ပွဲအတွက် - ဗေလုဝ
11. နဘမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် - ထက်ထက်မိုးဦး
... တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(တားဂ ချစ်လို့ စထှာ ငိ ငိ)
သန်၎ကို - ပေါက်ကရ၄၀
« Last post by နတ်ဆိုးကြီး on August 05, 2016, 01:20:06 PM »
သရော်စာ / Re: ဆားပုလင်းနေမင်း နှင့် မင်းသမီးဘော်လီပျောက်မှု (ရေးသူ Y.S.G)
« Last post by ဘိုဘို on June 16, 2016, 07:47:35 PM »
ဟာသ၊ ဥာဏ်စမ်း / Re: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ
« Last post by tunaye2011 on May 09, 2016, 03:05:00 PM »
« Last post by မင်းခေါင် on March 30, 2016, 10:22:17 AM »